ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति छ ? - Khabar Break | Khabar Break
नेपाली बजारमा केहि दिनयता सुनचाँदीको भाउ लगातार ओरोलो लागिरहेको छ । आज (बिहीबार) पनि बजारमा सुनचाँदीको भाउ घटेको छ ।
आज तोलामा एक हजार २ सय रुपैयाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको ९३ हजार एक सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको छ । हिजो पनि सुनको भाउ तोलामा एक हजार २ सय रुपैयाँ नै घटेर तोलाको ९४ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
केही दिनयता नाफा सुरक्षित गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन बिक्रीमा आएपछि भाउ घट्दै गएको महासङ्घ अन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए । यस्तै चाँदी आज तोलामा ७० रुपैयाँ घटेको छ । चाँदी आज तोलाको एक हजार एक सय २० रुपैयाँमा झरेको छ ।
एक बर्ष भन्दा बढी समययता सुनको भाउ महँगिंदा सुन कोरोबारमा निकै मन्दी आएको छ । जसका कारण सुन व्यवसायी मारमा परेका छन् । यस्तै सुनको भाउ महँगिएका कारण उपभोक्ताले समेत सुन चाँदीका गहना बनाएर लगाउन पाएका छैनन् ।
नेप्सेमा झिनो अङ्कले सुधार
शिवम् सिमेन्टले सेयरधनीलाई २४.२१ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने
आज सुनको भाउ स्थिर, कति छ तोलाको मुल्य ?
कोरोनाले बन्द रहेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १११ वटै उद्योग सञ्चालनमा
सुनको मुल्य आज पनि घट्यो, कति छ तोलाको भाउ ?
ओरालो लाग्यो आज सुनको भाउ, चाँदीको पनि घट्यो